Budapest Airport's ndekọ na-amalite mmalite
Location: Mbido » Ịdee » Airlines » Budapest Airport's ndekọ na-amalite mmalite
Nwere ike 9, 2017
Ọdụ ụgbọ elu Budapest ahụla mmalite ya kacha mma ruo otu afọ, na-akpatara ọnụ ụzọ ámá Hungary mebiri akara nde ndị njem kwa ọnwa n'April, otu ọnwa tupu ọ dị n'afọ gara aga. N'ịgbaso ọnwa 40 nke uto ya n'usoro, Budapest dekọtara mmụba dị egwu 17.5% kwa afọ na njem ndị njem na Eprel, karịa okpukpu abụọ nke mkpokọta EU nke 7%. Dị ka otu n'ime ọdụ ụgbọ elu ndị na-eto ngwa ngwa na Europe, amụma mmalite na-egosi ọdụ ụgbọ elu isi obodo Hungary ga-anabata ihe karịrị nde mmadụ iri na abụọ na 12, na-emebi ndekọ ọzọ.
Uto na ọnụ ọgụgụ ndị njem na-ebute ụzọ site n'ọtụtụ ụzọ ọhụrụ a na-agbakwunye na nhazi Budapest na ọnwa mbụ nke 2017 - ebe ọ malitere ọrụ ọhụrụ 11 n'afọ a, ọdụ ụgbọ elu nwere 13 ọzọ ka ịmalite. "Anyị ga-enye nso 800,000 oche ndị ọzọ n'oge okpomọkụ a karịa na 2016, a bukwanu 8% abawanye na elu nke anyị elu oge," Jost Lammers, CEO, Budapest ọdụ ụgbọ elu kwuru. “Ruo afọ a, anyị ahụla ka a na-akụ ndekọ ndị njem anyị kwa ọnwa yana mbelata nke ukwuu n'oge oge anyị. Site na mgbasawanye akara na nhazi oge okpomọkụ anyị, anyị enweghị obi abụọ na anyị ga-aga n'ihu n'ụzọ a nke uto ngwa ngwa," Lammers kwukwara.
Na Hungary na-anabata ihe karịrị nde mmadụ 16 ndị ọbịa na nke mbụ ya na akụkọ njem nlegharị anya ya, ọdụ ụgbọ elu Budapest na-etinye nde euro 160 n'ime akụrụngwa ya n'ime afọ atọ sochirinụ iji hụ na ọ nwere ike mezuo ihe achọrọ maka uto n'ọdịnihu yana mgbasawanye netwọkụ na-aga n'ihu. Atụmatụ mmepe ọdụ ụgbọ elu nke isi obodo Hungary:2020, gụnyere owuwu nke ụlọ ọdụ ụgbọ elu nke nwere ọnụ ụlọ 145 ga-emepe n'afọ a, oghere ọhụrụ na mpaghara na-abụghị Schengen n'ihi na S18 ga-arụcha ya, nbanye nbanye na-emeghe n'oge okpomọkụ a, na ọtụtụ ụlọ ọrụ ọhụrụ maka ndị na-ejikọta ibu na ndị na-elekọta. Lammers gara n'ihu ikwu, sị: “Anyị nwere ike iji mpako kwuo na ọnụ ọgụgụ ndị njem na-agafe ọdụ ụgbọ mmiri anyị dị ịrịba ama n'ezie. Ọ bụrụ na uto na-aga n'ihu n'ọkwa a, anyị nwere ike ịdị mkpa ịkwalite atụmatụ njedebe ọhụrụ n'ime mmemme atụmatụ nna ukwu anyị. "
UNWTO's Security Taskforce: Jamaica na-ahụ maka ndị njem nleta na-aga
Qatar Airway naara ọrụ mmeri ya na Yanbu